Shih Poo: Shih Tzu Poodle Mix အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ - Breeds
Shih Poo: Shih Tzu Poodle Mix အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Shih Poo သည်သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းသေးသေးလေး Poodle နှင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သော Shih Tzu ဖြစ်သည်။
သေးငယ်ပြီး hypoallergenic နှင့်လူ့ကုမ္ပဏီကိုမြှုပ်နှံထားသည့် Shih-Poo သည်အချစ်ပိုင်ရှင်နှင့်သူတို့၏ခြေလေးချောင်းရှိသောသူငယ်ချင်းနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းရန်အချိန်များစွာရှိသောအလွန်ကောင်းသောအဖော်ပြုနိုင်သည်။
Shih Tzu Poodle ရောစပ်မှုသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများရှိသည် အဖော်ခွေးသည် ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ချစ်ခင်အပါအဝင်; သူတို့ကိုမိသားစုမှကြီးစွာသောဖြည့်စွက်အောင်။
သို့ဆိုလျှင် Shih Poo ခွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာသိရှိရသနည်း၊ ဆက်လက်လေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ...
Shih Poo ခွေးမွေးမြူရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Shih Poo ခွေးပေါက်စ
Shih Poo အပြည့်အဝကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်
Shih-Poo Care လမ်းညွှန်
ဒီခွေးဟာ Shih Tzu နဲ့သေးသေးလေး Poodle ကြားကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုပါ။
အဆိုပါ Shih Poo ဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့နှလုံးနှင့်သေးငယ်တဲ့ဖောက် ။
အဆိုပါသေးသေးလေး Poodle ၏အသိဉာဏ်နှင့်ဇာတ်ကောင်
Shih Tzu ၏ချစ်ခင်စုံမက်မှုနှင့်သဘောသဘာဝ
စင်ကြယ်သောခွေးနှစ်ကောင်ကိုရောစပ်ခြင်းသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောစရိုက်များကိုဘယ်သောအခါမျှအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Shih Poo သည် Poodle မိဘထံမှပိုမိုခိုင်မာသောခိုင်မာသောစိတ်ဆန္ဒရှိနိုင်သည်။
၈-၁၅ လက်မအရှည်ရှိပြီး Shih Poo ဟာသေးငယ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရောင်အမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
Shih Poo ကို American Kennel Club မှသော်လည်းကောင်း၊ Kennel Club မှသော်လည်းကောင်းအသိအမှတ်မပြုပါ။
အကြောင်းမှာသူတို့သည်စင်ကြယ်သောမွေးမြူခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အချို့အဓိကခွေးဂေဟာစခန်းများ သွက်လက်ခြင်းနှင့်နာခံမှုဖြစ်ရပ်များအတွက်အချို့သော crossbreeds ၏မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်မပြုကြဘူး။
အမေရိကန်ခွေးတစ်ကောင် Hybrid ကလပ်
အမေရိက, Inc ၏ခွေးမှတ်ပုံတင်
ဒီဇိုင်နာ Dogs ခွေးဂေဟာကလပ်
တိကျစွာဖောက်ထားသောကလပ်သို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Shih Poo ကယ်ဆယ်ရေးကိုပိုမိုခက်ခဲအောင်လုပ်နိုင်သည်။
သူတို့ကမကြာသေးမီကပေါင်းစပ်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်သို့သော် လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များ မကြာခဏဒီလှပသောမျိုးစပ်များအတွက်တူညီသောစိတ်အားထက်သန်မှုမျှဝေသူတွေကိုတူသောထုတ်ဖေါ်။
ကြိုက်တယ် အများဆုံးဒီဇိုင်နာခွေး , နှစ်ခုမွေးမြူရေး၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်အချိန်မှာသိရှိနိုင်ရန်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံး Shih-Poo အမှိုက်သရိုက်များကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သို့သော်ဤချစ်ဖွယ်ကောင်းသောစပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်းကအမေရိကန်ကိုချုပ်ကိုင်ထားသည့်ဒီဇိုင်းခွေး၏လမ်းကြောင်းမှဖြစ်ပေါ်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ အခြားဝတ်ရည်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူရပ်ကြီးခံရသည့် poodle မြင်သည် နှစ်လိုဖွယ်စရိုက်များကိုမျှော်လင့်သောရောနှောမှုအတွက်ဖြစ်သည်။
တစ် ဦး Shih Poo ရဲ့အလားအလာစိတ်ထားနားလည်ရန်, ငါတို့မိဘနှစ် ဦး စလုံးမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
သေးသေးလေး Poodle ပခုံးနားမှာ ၁၃-၁၅ လက်မပတ်လည်မှာရှိပြီးခွေးတစ်ကောင်ဟာခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။
မူလကဂျာမနီတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအမဲလိုက်သည့်အဖော် (အထူးသဖြင့်ဘဲအမဲလိုက်ခြင်း) အနေဖြင့်ယခုသူတို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်သွက်လက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
Shih Tzu ရဲ့အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖြစ်ကြသည် မူလကတရုတ် ။
များစွာသောရင်ခွင်ခွေးလိုပဲ သူတို့ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသူများနှင့်ကျော်ကြားသူများကနှစ်သက်ကြသည်။ Shih Tzu ကိစ္စတွင်တရုတ်Emကရာဇ်မင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Shih Poo ခွေးအချက်အလက်
အရွယ်အစား ၈ မှ ၁၅″
အလေးချိန် 8 မှ 18 ပေါင်
သက်တမ်း ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ
အသင့်တော်ဆုံး အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောပိုင်ရှင်များ၊ အဟောင်းများနှင့်ကလေးများရှိသောမိသားစုများ
အရောင်အမျိုးမျိုး Apricot၊ အနက်ရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် Tan၊ အညိုရောင်၊ Cream၊ အနီရောင် Sable၊ အဖြူနှင့်ပါတီ - အရောင်များ။
အပူချိန် သစ္စာစောင့်သိချစ်ခင်, ကစားခြင်း, အသိဉာဏ်, ချိုသောသဘောသဘာဝ
အခြားအမည်များ Pooshih, Shoodle သို့မဟုတ် Shihdoodle
Shih-Poo အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးဖောက်လမ်းညွှန်အခမဲ့မိတ္တူကို download လုပ်ပါ ။
Shih Poo ခွေးကလေးသည်မည်သည့်အရာကိုကြည့်မြင်မည်ကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည် - သူတို့မွေးဖွားသည်အထိသူတို့၏ပုံပန်းသဏ္appearanceာန်သည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မိဘနှစ် ဦး စလုံးသည်တစ်နှစ်အတွင်းရင့်ကျက်မှုနှင့်အရွယ်အစားအပြည့်အဝရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာရင့်ကျက်သောကြောင့် Shih Poo သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာရင့်ကျက်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့သည် ၁၂ လအတွင်းလူကြီးများသို့ရောက်နိုင်သည်။
Shih Poo စျေးနှုန်းသည်အမှိုက်သရိုက်များနှင့်မျိုးဆက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ပုံမှန် Shih-Poo ခွေးပေါက်စသည်ဒေါ်လာ ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားကြားရှိသည်။
Shih Tzu ရဲ့ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမှိုက်သရိုက်တစ်ကောင်လျှင်ခွေးပေါက်ကလေး ၅ ကောင်ခန့်ရှိပြီး Miniature Poodles ကအမှိုက်သရိုက်များထဲတွင်သုံးကောင်ရှိသည်။ မိဘမျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားကြည့်လျှင်၊ ဒီမျိုးစပ်အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားသည်ခွေးပေါက်စ ၃ ကောင်မှ ၅ ကောင်အထိရှိသည်။
3 လ ၃.၅ ၄.၅
6 လ ၇.၅ ၁၃
၉ လ ၈ ဆယ့်ငါး
၁၂ လ ၈ ၁၈
Shih Tzu Poodle ရောစပ်ခြင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာပါသောအသိဥာဏ်ရှိသောမျိုးစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Shih Poo ၏မိဘနှစ်မျိုးစလုံးသည်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသည် လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှု တစ် ဦး သစ္စာစောင့်သိသေးငယ်တဲ့မိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်။
Shih Poo သည်အလွန်ပျော့ပျောင်း။ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည် ကူးစက်တတ်သောပျော်စရာ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာသဘောထား ။
ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး ကျူးကျော်အဆင့်ဆင့် အရမ်းဒီခွေးအတွက်အတော်လေးနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။
Shih Poo သည်ကာလကြာရှည်စွာသူတို့ဘာသာသူတို့ကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်ပြီးမကြာခဏလိုအပ်နေသောစိတ်နေသဘောထားဖြစ်သည်။
လူငယ်တစ် ဦး မှာသင့်လျော်သောလူမှုရေး သူစိမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါမည်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမဆိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ကျူးကျော်ခြင်းတို့ကိုတိုက်ဖျက်ရန်လုံလောက်သင့်သည်။
Shih Poos သည်နယ်နိမိတ်များကိုသေချာပေါက်လေးစားမှုမရှိသောကလေးငယ်များကိုသည်းမခံနိုင်ချေ၊ ထို့ကြောင့်ဤခွေးနှင့်ကလေးငယ်များကိုမိတ်ဆက်သည့်အခါဂရုပြုသင့်သည်။
သူတို့ဖြစ်လျှင် ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်ကလေးငယ်များနှင့်ထိတွေ့ နှင့်ကလေးကအမြဲတမ်းကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ခွေးရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုလေးစားရန်သင်ကြားသည်, ဒီခွေးဖောက်မိသားစုသို့ကြိုဆိုခံရနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြproblemနာရှိသင့်ပါတယ်။
Shih Poo မှာလည်းအခြားမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူပြaနာမရှိသင့်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Shih Poo သည်လူမှုရေးနှင့်ကစားစရာခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုပေးချင်သည့်စိတ်များစွာရှိသော်လည်းသူတို့သည်သူစိမ်းများကိုအနည်းငယ်ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလူသစ်များနဲ့ခွေးများကိုထိတွေ့ခြင်းဟာသူတို့ကြီးပြင်းလာဖို့သေချာစေသင့်ပါတယ် တစ် ဦး ယုံကြည်မှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ခွေး !
နှစ် ဦး စလုံးမိဘဝတ်ရည်ပါပြီအဖြစ် အဖော်ခွေးအဖြစ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်ကြီး , မည်သည့်သဘာဝအပြုအမူသို့မဟုတ်အမဲလိုက်ဗီဇသုဉ်းပြီ။
ဤခွေးသည်လူ့ကုမ္ပဏီနှင့်ပိုမိုလေ့ရှိပြီးခွေးတစ်ကောင်၏မိတ်ဆွေသစ်၏ကုမ္ပဏီထက် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ သူတို့သည်အပြင်ဘက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းကိုနှစ်သက်ကြပြီးတစ်နေ့လျှင်တစ်နေ့တိုတောင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
Shih Tzu Poodle ရောစပ်ခြင်းသည်အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိပြီး ၎င်း၏ပိုင်ရှင်နှင့်အတူခိုင်မာသောနှောင်ကြိုးဖြစ်ပေါ်စေသည် ။ သူတို့ကအရမ်းအပျော်အပျက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့အားအရာနှစ်ခုလုံးအတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်းမှအကျိုး; သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလူသားနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကစား!
Shih Poo ခွေးသည် ၈ လက်မမှ ၁၅ လက်မအမြင့်အထိရှိပြီးအလေးချိန် ၈-၁၈ ပေါင်အထိရှိသည်။
Shih Poo ဟာခွေးကလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးယောက်ျားရောမိန်းမပါပါ ၈-၁၈ ပေါင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
သူတို့က ၈-၁၅ လက်မအကြားရှိညှိုးနွမ်းသူများအထိတိုင်းတာသည်။
ဤခွေးသည်အသားအရောင်ခွဲခြားထားသဖြင့်ယောက်ျားများသည်အမြဲတမ်းပိုကြီးလိမ့်မည်ကိုသင်မသေချာပါ။ အများဆုံး purebreds များအတွက်အမှုဖြစ်သကဲ့သို့ ကဗီဇအမွေဥစ္စာအပေါ်ပိုမိုမူတည်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် (သူတို့ရဲ့ယူ။ ) ကြီးမားသောဝမ်းကွဲဥပမာ, Sheepadoodles ) ။
Shih Tzu နှင့် Miniature Poodle ကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းကအမှိုက်သရိုက်များမှခွေးများသည်မျိုးရိုးဗီဇအမွေပေါ် မူတည်၍ လုံးဝကွဲပြားနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင် Shih Poo တွင်အချော့မွေ့သောနားများနှင့်အချိုးကျသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသောအဝိုင်းမျက်နှာရှိသည်။
Shih Poo ခွေးတချို့ undershot မေးရိုးရှိသည် အခြားသူများမှာကောင်းစွာမျှတသောမေးရိုးရှိနေစဉ်။
သူတို့မှာအလောင်းတွေ၊ ကြွက်သားတွေ၊ ရှေ့ခြေတွေတိုပြီးနောက်ကျောတစ်ချောင်းရှိတယ်။
Shih Poo အရောင်များ
တရုတ်ဇီးသီး အနက်ရောင် အနက်ရောင်နှင့် Tan အညိုရောင်
Cream အနီရောင် Sable အဖြူရောင် ပါတီအရောင်
တူညီသောအမှိုက်သရိုက်များမှခွေးပေါက်များပင်ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ကျီများဖြင့်ထားနိုင်ပြီး 'ပုံမှန်' ခွေးတစ်ကောင်မည်သို့မြင်မည်ကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။
သူတို့ကဖြစ်စေအမွေဆက်ခံနိုင်ပါတယ် အဆိုပါ Poodle ကနေသိုးမွှေးကုတ်အင်္ကျီ , ဒါမှမဟုတ် Shih Tzu ၏ပိုမိုရှည်လျားသော straighter အင်္ကျီ; တစ်ခုခုကိုလမ်းသူတို့ဖြစ်ကြသည် အလွန် fluffy ဖြစ်ဖွယ်ရှိ!
မှတ်သားသင့်သည်မှာအချက်မှာ Shih Tzu တွင်အလွန်နည်းသောသုတ်လိပ်အင်္ကျီရှိပြီး Poodle ၏အင်္ကျီနှင့်ပေါင်းသောအခါဤသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ Shih Poo hypoallergenic ဖြစ်ပါတယ် ။
Shih Poo သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းမှအကျိုးရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူတို့၏အင်္ကျီများကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်၊
(Shih Tzu ကဲ့သို့) ကုတ်အင်္ကျီသည်ပိုမိုရှည်လျား။ မှန်လျှင်၊ အိမ်၌နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မလုံလောက်ခြင်းအားကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
သွားဖုံးရောဂါပြtoနာကြောင့်ဤဖောက်ခြင်းတွင်သွားတိုက်ခြင်းသည်အထူးအရေးကြီးသည် Shih Tzu မိဘမှာတွေ့တယ် ။
သွားတိုက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောဂါနှင့်သွားမသွားခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သွားပွတ်တံရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါကပွန်းစားခြင်းဝါးစားခြင်း၊ ကစားစရာနှင့်သွားဝါးကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤသည်ခွေးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးလိုအပ်ချက်များကိုအလွန်နိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများမှာ, သင်မူကား, သငျသညျစိတျထဲ၌သူတို့၏ပုံမှန်ဖြီးလိမ်းပုံများအတွက်လိုအပ်သောအပိုပိုက်ဆံသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ပိုင်ရှင်တွေကဒီခွေးကို ၀ ယ်ယူဖို့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဘဏ္costာရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် Shih Poo ဟာကလေးငယ်တွေရှိတဲ့မိသားစုတွေ၊ တိုက်ခန်းတွေ၊ အိမ်ငယ်တွေနဲ့အငြိမ်းစားတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
လမ်းညွှန် 600 ကယ်လိုရီ
တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သော kibble သည်ဤခွေးအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သွားနှင့်ဆိုင်သောသွားပြproblemsနာများဖြစ်ပြီးသွားတိုက်ခြင်းကအစာခြောက်သွေ့သောအစားအစာများကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည်။
kibble သည်၎င်းတို့၏အသက်အရွယ် (ဆိုလိုသည်မှာခွေးပေါက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသို့မဟုတ်အကြီးတန်း) နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် kibble သည်ခွေးငယ်များအတွက်ဖော်စပ်ထားသည် (ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုသေးငယ်သောဘီစကစ်မုန့်သည်၎င်းတို့ကိုအစာကြေစေရန်လွယ်ကူစေသည်) ။
၎င်းတို့သည်အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်း (နှင့်လူသားစားစရာများတောင်းခံခြင်း) ကိုလည်းပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလေးချိန်အလွန်အကျွံထည့်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်သူတို့၏စားသုံးမှုပမာဏကိုစောင့်ကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။
မိနစ်များ မိနစ် 30 မှ 40 မိနစ်
Shih Poo အရွယ်ရောက်ပြီးသောသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးအိမ်၌ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာဖြစ်ရန်တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၄၀ ခန့်လမ်းလျှောက်သင့်သည်။
အိမ်နောက်ဖေးကစား ဘောလုံးသို့မဟုတ်ဆွဲကစားစရာတစ်ခုနှင့်အတူ , Shih-Poo မှအရည်အသွေးမြင့်သောလူသား / ခွေးအချိန်ကာလကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်အတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာ၌လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ Shih Poo ခွေးအားသူငယ်ချင်းအသစ်များရှာဖွေရန်နှင့်ရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။
ဤခွေးသည်အသိဉာဏ်ရှိသောလက်ဝါးကပ်တိုင်မျိုးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူတို့နှင့် ပို၍ ခေါင်းမာသောအရာရှိနိုင်သည်။
မည်သည့်ခွေးမဆိုကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့သည် ၈ ပတ်မှ ၁၆ ပတ်အကြားတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများကိုပေါင်းသင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အသက်ကြီးလာသောအခါအခြေအနေအသစ်များတွင်၎င်းတို့ကိုပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေပြီးကြောက်ရွံ့မှုနည်းပါးစေသည်။
သူတို့၏ဥာဏ်ရည်ကြောင့် Shih Poo သည်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာပြီးပျက်စီးခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်များသောအားဖြင့်လူ့အဆက်အသွယ်အမြောက်အများကိုရရှိနိုင်သင့်ပြီးအခြားခွေးတစ်ကောင်အဖော်တစ် ဦး ကရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိသောနေရာတွင်ပျင်းပျောက်သက်သာစေရန်အမျိုးမျိုးသောပဟေfeedိအစာကျွေးခြင်းနှင့်ကောင်ကောင်စသည်တို့ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုတက်ကြွစေပါ ။
မကြာသေးမီကမျိုးစုံပေါက်ခဲ့သော်လည်းမျိုးဆက်များက Shih Poo သက်တမ်းသည် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အကြားဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့် Shih-Poo သည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့ရှိသည်။
သိုင်းရွိုက်ရောဂါ (Hyper or hypo) ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်း၊
Pinched နှာခေါင်းနှင့် Shih Tzu ၏ပျော့ပျောင်းသော pallet က Shih Poo သည်အသက်ရှူကျပ်သည့်အခက်အခဲအချို့ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏တစ် ဦး bungle, အ Shih Poo မည်သူမဆိုရဲ့နှလုံးခိုးယူဖွယ်ရှိသည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အိမ်ငယ်များရှိသောလူတို့အတွက်သင့်တော်သော Shih-Poo သည်အဆုံးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများသို့မဟုတ်လှည့်စားအစားအစာများမလိုအပ်ပါ။
အဆိုပါ Shih Poo အဟောင်းနှင့်တာဝန်ရှိကလေးများနှင့်ထိုခေါင်းမာဘက်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးစိန်ခေါ်မှုအတွက်တက်နေသောအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောပိုင်ရှင်များနှင့်အတူမိသားစုမှအလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်စေနိုင်သည်!
ဒီသေးငယ်တဲ့ဖောက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများကြီး fluffy ဝမ်းမြောက်သောအစုအဝေးသို့ compacts ။ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကဘာတွေလဲ အောက်ကိုသိပါစေ။
အားလုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံး Labrador Retriever အရောင်များ
Rhodesian Ridgeback စျေး - ခွေးပေါက်စများကိုမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
micro french ခွေးဘီလူးသည်အပြည့်အ ၀ ကြီးထွားသည်
pit bulls အမျိုးအစားများစာရင်း